Lego တိုင်း Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? set ကို season 1 မှာပြသခဲ့တယ်
06 / 10 / 2021 07 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 566 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်နှင့် The Hydra Stomper, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego Marvel, Marvel, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
တိုင်း Lego Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? set နှင့် minifigure တိုင်းနီးပါးသည် Season 1 တွင်ပါ ၀ င်သည်၊ ငါတို့သည်ပျောက်ဆုံးနေသော model ကို source နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခွင့်ပြုသည်။
သတိပေးပါ၊ spoilers များသည်နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းအတွက်ရှေ့တွင်ရှိသည် Marvel စတူဒီယိုရဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင် ... Season 1, ဒါကြောင့်အဝေးကိုကလစ် နှိပ်၍ နောက်ဆုံးလွှင့်ခြင်းကိုယခုကြည့်ပါ Disneyနောက်ထပ်မဖတ်ခင် +
What If ရဲ့ Final မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း ... Season 1, ကာတွန်းကောင်တာart ဘို့ 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man feature ကိုစီမံနိုင်ခဲ့သည် ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ပထမအပိုင်း၌၊ အစအဆုံးအစအဆုံးမရရှိခဲ့သော်လည်းအစပိုင်းအတွက်အရင်းအမြစ်လှုံ့ဆော်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper.
The Watcher သည်အဖွဲ့ ၀ င်များအား Ultron ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန်အင်အားရှာဖွေရာတွင်သူသည် Sakaarian ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံကို Tony Stark နှင့် Tony Sark တို့နှင့်တွေ့နိုင်သည်။ စကြဝာနှင့်တူသည် Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora သူမအဖေကဲ့သို့လူကြမ်းမဟုတ်ပါ။
Gamora ကိုတွေ့နိုင်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို, Sakaarian Iron Man ကိုအသားပေးဖော်ပြထားသည် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man အပြာရောင်ဓာတ်ပြားများနှင့်သံချပ်အတွက်အရောင်အစီအစဉ်ကဲ့သို့ What If …? တွင်တွေ့မြင်နိုင်သောတူညီသောဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းများစွာပါ ၀ င်သည်။
ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်အစအဆုံးကိုအသွင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသော်လည်းအစအဆုံးကိုနောက်ဆုံးကား၌သုံးသည်။ ဤသည်နှင့် Valkyrie လုံးဝမရှိခြင်းသည်ဤအချက်ကိုထောက်ပြနိုင်သည် ဇာတ်လမ်းတွဲနောက်ကျသည် Season2သို့ပြောင်းခဲ့သည်။
ပထမရာသီ၌ပွဲ ဦး ထွက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအခန်းတစ်ခု၏နှောင့်နှေးမှုကိုအမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Brad Winderbaum ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအပြည့်အ ၀ ကိုကြည့်ရန်အနည်းငယ်ပိုကြာရန်လိုသည် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Manဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်ထိမော်ဒယ်ကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှာရနိုင်ပါတယ်။
အခြားတရားဝင်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြီ Marvelဘာဖြစ်လဲ…? မှလည်း 71031 Marvel စတူဒီယို သို့ 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper.
← Lego Ideas နောက်ထပ်ဆုများနှင့် NINJAGO Microgame ပြိုင်ပွဲကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
နေ့၏အုတ်ပုံ - သင်ရှာဖွေနေသည့် droids များမဟုတ်ပါ →